PERIKOPA FJKM ALAHADY 14 DESAMBRA 2014 | FJKM Amboniloha
PERIKOPA FJKM ALAHADY 14 DESAMBRA 2014
MAHAZO ANTOKA NY FAMONJENA NY MINO
Salamo 62:1-8 / Jaona 10:22-30 / 2 Tesaloniana 2:13-17
1 [Fiantombenan’ny fanahy izay manantena an’Andriamanitra, na dia mafy aza ny famelin’ny fahavalo] Ho an’ny mpiventy hira. Al-jedotona. Salamo nataon’i Davida. Andriamanitra tokoa no iantombenan’ny fanahiko; avy aminy ny famonjena ahy.
2 Izy tokoa no vatolampiko sy famonjena ahy, dia fiarovana avo ho ahy ka tsy hangozohozo loatra aho.
3 Mandra-pahoviana no hirohotanareo hamely olona sy handrodananareo rehetra azy toy ny manda mirona sy ny rova mihozongozona;
4 Misaina hanongana azy hiala amin’ny voninahiny ireny; lainga no ifaliany, misaotra amin’ny vavany izy, fa manozona amin’ny fony.
5 Miantombena amin’Andriamanitra tokoa ianao, ry fanahiko; fa Izy no antenaiko.
6 Izy tokoa no vatolampiko sy famonjena ahy, dia fiarovana avo ho ahy, ka tsy mba hangozohozo aho.
7 Andriamanitra no iankinan’ny famonjena ahy sy ny voninahitro; ny vatolampiko mafy sy ny aroko dia ao amin’Andriamanitra.
8 Matokia Azy mandrakariva ianareo, ry olona; loary eo anatrehany ny fonareo; Andriamanitra no aro ho antsika.
23 Ary Jesosy nitsangantsangana teo an-kianjan’ny tempoly teo amin’ny Fialofan’i Solomona.
24 Dia nitangoronan’ny Jiosy Izy ka nanontaniany hoe: Ambara-pahoviana no hampisalasalanao anay? Raha Hianao no Kristy, dia lazao marimarina aminay.
25 Jesosy namaly azy hoe: Efa nilaza taminareo ihany Aho, nefa tsy mino ianareo; ny asa izay ataoko amin’ny anaran’ny Raiko no manambara Ahy.
26 Kanefa ianareo tsy mino, satria tsy mba isan’ny ondriko.
28 ary Izaho manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsy hisy handrombaka azy amin’ny tanako.
29 Ny Raiko Izay nanome Ahy dia lehibe noho izy rehetra; ary tsy misy mahay mandrombaka amin’ny tanan’ny Ray.
2 Tesaloniana 2:13-17
13 [Fananarana sy fanaovam-beloma] Fa izahay tsy maintsy misaotra an’Andriamanitra mandrakariva ny aminareo, ry rahalahy malalan’ny Tompo, satria Andriamanitra efa nifidy anareo hatramin’ny voalohany hahazo famonjena amin’ny fanamasinan’ny Fanahy sy ny finoana ny marina,
14 sady ho amin’izany koa no niantsoany anareo tamin’ny filazantsaranay hahazoanareo ny voninahitr’i Jesosy Kristy Tompontsika.
15 Koa tomoera tsara, ry rahalahy, ka hazòny ny fampianarana natolotra izay nampianarina anareo, na tamin’ny teninay, na tamin’ny epistilinay.
16 Ary Jesosy Kristy Tompontsika sy Andriamanitra Raintsika, Izay efa tia antsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin’ny fahasoavana,
17 no hampionona ny fonareo anie sy hampahery anareo amin’ny asa sy ny teny tsara rehetra.
Catégories :	Perikopa FJKM	/ par AnjGab 8 décembre 2014